Shiinaha midab daahan caag ah buraashka timaha caadiga ah leh naqshad raaxo leh warshad iyo saarayaasha | Yongsheng
Dahaarka caagga midabka burushka timaha caadiga ah ee leh nashqadeynta raaxo leh
Waxyaabaha: ABS ， caag ， nylon, nuurad.
Midabka: Madow, Casaan.
Wax soosaarka kahor ------ muunad ---- xaqiijin-Wax iibsi-Qeyb - Qeyb Cirbadda-Tayada ------ kormeerka-Qeybta ------ qeyb - ---- dusha sare ------ Dhameystirka-Tayada ------ kormeerka-Golaha-Tayada ------ kormeerka-xirxirida.
Qadiimiga ah oo loo qaabeeyey oo leh dabool jilicsan taabasho jilicsan si aad u fudud si uu u haysto oo raaxo leh. Burushka timaha ayaa lagu dhammeeyay walxaha maqaarka si loo hubiyo xajin adag.
Burushka timaha barkinta suufku wuxuu ku jiri karaa qaabab kala duwan, barkinta jilicsan ee ay ku jirto naylon ama isku-dhafka isku dhafan ma xiiqi doonaan ama jiidi doonaan timaha, sidoo kale waxay noqon kartaa duugis wanaagsan. Saldhigga barkinku wuxuu kiciyaa socodka dhiigga ee madaxa, wuxuu soo saaraa timo caafimaad leh, wuxuu dhiirrigeliyaa koritaanka timaha, wuxuuna ku kobciyaa timaha dufanka leh saliidaha dabiiciga ah, halka daloolka hawo yar uu yareeyo culeyska hawada si looga fogaado inuu waxyeello madaxa. Waxaa jiri doona dalool barkinta. Waxay u oggolaan kartaa hawo inay wareegto waxayna la socon kartaa duugista jilicsan ee jilicsan.
Burushka timaha dalool ayaa ku habboon in loo isticmaalo dhammaan noocyada timaha: ganaax, dhumuc ama qallooc. Badeecadani waxay ku habboon tahay qof walba waxayna ka shaqeysaa waxyaabo yaab leh timaha qoyan ama qalalan. Buraashka timaha ee hawo weyn leh ayaa ku habboon qalooca madaxa.
Burushka timaha wareega waxay abuuri kartaa hirar jilicsan ama curls, waxay ku dari kartaa jirka & buuxda ama hawo & toosin kartaa qalafsanaan, timo jilicsan ama hareeraysan.
Waxaad dooran kartaa midab kasta oo loogu talagalay daahan caag ah, hal midab oo ah burushka godka ama qaabab midab gooni ah oo loogu talagalay madaxa iyo xamulka. Hal astaan ​​midab waa bilaash. Xirmada caadiga ah waa boorsada nayloon ee furan. Sidoo kale waxaan bixin karnaa hangool balaastig ah, warqad laalaada, kaarka warqada, boorsooyinka opp, sanduuqa PET iyo bandhig.
Xiga: Shanlada ilkaha fidisa ee fidsan oo leh gacan qabad leh
Boars Timo Burush
Burush Timo Copper
Burushka Timaha Birta
Caday Mini Wooden Timaha
Burushka Timaha Gawaarida Gaarka ah
Burushka Timaha Doofaarka
Burushka Timaha Horse Wooden
Burush timaha daahan buraash la printin midabo ...
UV koronto, tarjuma biyaha, shinning daabacaadda h ...